Ụlọ nri Lavender Cottage - IntoKildare
Site na ihe ndozi ya mara mma, obere izobe a dị ịtụnanya ga -eme ka ọnụnọ gị na Co. Kildare bụrụ ihe obi ụtọ. Lavender Cottage nwere ụlọ ime ụlọ 2 sara mbara (na-ehi ụra 4/5), ha abụọ nwere akwa eze, yana nke nwere ọnụ ụlọ ịsa ahụ. Enwere kichin atụmatụ mepere emepe, mpaghara ebe nri yana akwa sofa ọzọ.
Lavender Cottage dị nso na Newbridge nwere ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka ya gụnyere nnukwu ụlọ ahịa mpaghara mpaghara Ireland, ụlọ mmanya ọdịnala na ụlọ mmanya, ụlọ oriri na ọ ,ụ ,ụ, sinima, ogige osimiri na ije na oghere nke Curragh Plains naanị nkeji iri na ise.
A ga-enye ihe niile ị nwere ike ịchọ n'ime ụlọ, gụnyere TV satịlaịtị, ihe ọkpụkpọ DVD na Wi-Fi n'efu.
Ogige ahụ nwere ogige anwụ na -acha nke ọma na nke echekwara gburugburu ụlọ. Enwere nnukwu ahịhịa ahịhịa na arịa ụlọ patio - ebe mara mma ịnọdụ ala n'ụtụtụ ụtụtụ. Enwekwara ọtụtụ ebe a na -adọba ụgbọala n'akụkụ ụlọ ahụ.
Ma ọnụnọ gị bụ maka ezinụlọ na ndị enyi ma ọ bụ njem, ị nweghị ike ịrịọ maka ịlaghachi azụ na -atọ ụtọ site na ọgba aghara nke ndụ na -arụsi ọrụ ike, mana ị ga -elepụ anya na windo gị ka ịhụ ọmarịcha obodo gbara gị gburugburu.
Isiri onwe nri, mmefu ego, Ezigbo ezinụlọ, Newbridge
Newbridge, Obodo Kildare, W12 HE93, Ireland.